Nanda An’i Jesosy i Petera | Fiainan’i Jesosy
Nanda An’i Jesosy i Petera
MATIO 26:69-75 MARKA 14:66-72 LIOKA 22:54-62 JAONA 18:15-18, 25-27
NANDA HO TSY NAHALALA AN’I JESOSY I PETERA
Natahotra ireo apostoly rehefa nosamborina i Jesosy, tao amin’ny zaridainan’i Getsemane. Nandao azy àry izy ireo ka nandositra. Niverina anefa ny roa, dia i Petera sy “ny mpianatra iray”, izay angamba ny apostoly Jaona. (Jaona 18:15; 19:35; 21:24) Nety ho nahatratra an’i Jesosy izy ireo tamin’izy nentina ho any an-tranon’i Anasy. Nanaraka teny lavidavitra teny izy roa lahy, rehefa nalefan’i Anasy tany amin’i Kaiafa Mpisoronabe i Jesosy. Sady natahotra ny hamoy ny ainy angamba izy ireo no nanahy hoe inona no hanjo an’ilay Tompony.
Fantatry ny mpisoronabe i Jaona, ka tafiditra tao an-tokotanin’i Kaiafa. Nijanona tany ivelan’ny vavahady kosa i Petera. Niverina i Jaona avy eo ary niresaka tamin’ny mpanompovavy iray mpiandry vavahady ka navela hiditra i Petera.
Nangatsiaka tamin’io alina io ka nandrehitra afon-tsaribao ny olona teo an-tokotany. Nipetraka niaraka tamin’izy ireo i Petera ary niandry “mba hahita izay hiafaran’ny” fitsarana an’i Jesosy. (Matio 26:58) Notarafin’ny hazavan’ilay afo i Petera, ka nahita azy kokoa ilay mpiandry vavahady nampiditra azy. Hoy izy: “Tsy anisan’ny mpianatr’io lehilahy io koa ve ianao?” (Jaona 18:17) Nisy olon-kafa koa teo nahalala an’i Petera sy niampanga azy ho niaraka tamin’i Jesosy.—Matio 26:69, 71-73; Marka 14:70.
Tsy hitan’i Petera mihitsy izay hatao. Niezaka niafinafina izy ka nankeo amin’ny fidirana. Nolaviny hoe niaraka tamin’i Jesosy izy. Hoy izy: “Tsy fantatro izy ary tsy azoko izay lazainao.” (Marka 14:67, 68) Nanomboka “niozona sy nianiana” koa izy. (Matio 26:74) Midika izany fa nianiana izy hoe marina ny teniny ary raha tsy marina izany dia vonona ny hijaly izy.
Nitohy ihany ny fitsarana an’i Jesosy. Toa tao an-tranon’i Kaiafa teo ambonin’ilay tokotany no nanaovana an’ilay fitsarana. Nety ho nahita an’ireo vavolombelona nivezivezy mba hiampanga an’i Jesosy àry i Petera sy ny olon-kafa teo an-tokotany.
Niharihary tamin’ny fitenin’i Petera fa avy tany Galilia izy, ka hita fa tsy marina ilay fandavany. Nisy havan’i Malko koa teo. Ny sofin’izy io ilay notapahin’i Petera. Nisy niteny tamin’i Petera àry hoe: “Tsy efa hitako tao amin’ny zaridaina niaraka taminy ve ianao?” Nanda indray i Petera. Fanintelony tamin’io izy no nanda ary nisy akoho naneno, araka ny efa nolazain’i Jesosy.—Jaona 13:38; 18:26, 27.
Toa teo an-davarangana i Jesosy tamin’izay, ka nahatazana an’izay nitranga teo an-tokotany. Nitodika ny Tompo ka nibanjina an’i Petera. Azo antoka fa nalahelo mafy i Petera. Tadidiny ilay tenin’i Jesosy tao amin’ilay efitra ambony rihana, ora vitsivitsy monja talohan’izay. Mba eritrereto ange ny fihetseham-pony rehefa tonga saina izy hoe inona no nataony e! Nivoaka tany ivelany izy ka nitomany tamin’alahelo be.—Lioka 22:61, 62.
Fa nahoana i Petera no nanda an’i Jesosy, nefa natoky erỳ izy fa natanjaka ara-panahy sy tsy hivadika? Namboamboarina ny tena marina, ary nolazaina fa jiolahy i Jesosy na dia tsy nanan-tsiny aza. Afaka niaro azy i Petera nefa tsy nanao izany. Nolaviny kosa ilay “manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay.”—Jaona 6:68.
Inona no ianarantsika avy amin’izay nanjo an’i Petera? Mety hivadika na dia ny olona manam-pinoana sy tia an’Andriamanitra aza, raha tsy miomana tsara mba hiatrika fitsapana na fakam-panahy tsy ampoizina. Anatra ho an’ny mpanompon’Andriamanitra rehetra ny nanjo an’i Petera.
Ahoana no nahafahan’i Petera sy Jaona niditra tao an-tokotanin’i Kaiafa?
Inona no nitranga tao an-tranon’i Kaiafa, tamin’i Petera sy Jaona teo an-tokotany?
Inona no dikan’ilay Petera niozona sy nianiana?
Inona no lesona lehibe ianarantsika avy amin’izay nanjo an’i Petera?
Hizara Hizara Nanda An’i Jesosy i Petera